Wararka - Ma mudan tahay in la iibsado bacaha jeermiska bakteeriyada UV?
Si aad nooga ilaaliso fayraska, waxaan dooran lahayn inaan xirno waji-waji, gacmo-dhaqashada, ilaalinta masaafada bulshada Laakiin markaan u tagno dadweynaha, dhammaan alaabteenna waxaa laga yaabaa inay halis ugu jiraan inaan fayras ugu qaadno guriga, sida taleefanka gacanta oo qayb noo ah maanta. Sidee looga joojiyaa taleefannada gacanta / furayaasha / dalladda / jijimooyinka fayraska? Boorsada aaladda UV-ka ama shandada-boorso ayaa wax badan kaa caawin karta.
Iftiinka UV-ga wuxuu leeyahay waxtar badan, oo farageliya oo baabi'iya asiidhyada nucleic ee bakteeriyada iyo microbes-yada kale. Waa fikrad fiican in laydhka UV la geliyo shandad ama shandad fudud oo si fudud loo qaadan karo.
Dhawaan waxaan soo saarnay boorso nadiifin ah oo UV ah taas oo ku xirnaan karta boorsada dhabarka. Bacda UV-ka ayaa runtii kaa caawin kara markaad u tagayso dadweynaha ama aad guriga joogto. Waad dhigi kartaa furayaasha, waji shareerka, mobilada, muraayadaha, buraashka qurxinta ama xitaa dhalooyinka biyaha. Waad ogtahay inaadan dhaladaada dhaqin sida ugu badan ee aad u baahan tahay.
Boorsada aaladda UV-ka ka ilaalisaa ayaa kaa caawin kari weyday oo keliya, laakiin dadka kugu hareeraysan, qoyskaaga ama asxaabtaada iyo asxaabtaada. Waxay sidoo kale isticmaali karaan markii la helo, maaddaama nalka UV-ku uu dili doono bakteeriyada si dhakhso leh.
Si kastaba ha noqotee, iibsashada bacda jeermiska UV ma aha marin biyoodka daaweynta, ka hortagga fayraska, sidoo kale ma beddeleyso ama yareyneyso baahida loo qabo in gacmaha la dhaqo oo lagu dhaqmo kala fogaanshaha bulshada ee aaminka ah. Waxay noo sahlaysaa inaan jeermiska ka qaadno alaabtayada waxayna na xusuusisaa inaan ka digtoonaanno sameynta dhammaan noocyada jeermiska. Guud ahaan, waa shey wanaagsan in la iibsado.